गोतामेको ‘निती’ लोकार्पित
काठमाडौँ । साहित्यिक पत्रकार सङ्घको आयोजनामा शनिबार भएको एक विशेष कार्यक्रममा मीरा गोतामेको उपन्यास नितीको लोकार्पण भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कथाकार भागीरथी श्रेष्ठ, विशेष अतिथि गुन्जनका अध्यक्ष हिरण्यकुमारी पाठक, प्रमुख वक्ता समालोचक प्रमोद प्रधान, अनेसासका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेत र आयोजक संस्थाका अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली लगायतले पुस्तक लोकार्पण गरेका थिए ।
स्रष्टा मीरा गोतामेको यो पहिलो कृति हो । ३५ अध्यायमा लेखिएको यो उपन्यास अनेसास एसिया च्याप्टरको प्रकाशन संयोजनमा धर्मराज बोगटीले प्रकाशित गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भागीरथी श्रेष्ठले उपन्यास कुतूहलपूर्ण भएकोले पढ्न थालेपछि नसकिएसम्म तानिरहने बताए । विषय, घटना, पात्र र भाषा सबै दृष्टिबाट पुस्तक राम्रो रहेको बताउँदै उनले उपन्यासको अन्त्यले न्याय गरेको धारणा राखे । अर्का वक्ता हिरण्यकुमारी पाठकले महिला साहित्यकारहरूको संस्था गुन्जन १० जनाबाट सुरु भएकोमा १०० भन्दा बढी सदस्य भएको जानकारी दिदै महिला साहित्यकारको सङ्ख्या बढ्नु सुखद् भएको बताए ।
प्रमुख वक्ता समालोचक प्रमोद प्रधानले उपन्यासमा नेपाली नारीले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्यालाई सचेततापूर्वक उठाइएको र त्यसलाई न्यायपूर्ण तरिकाले निरूपण गरिएको बताए । उनले भने, ‘उपन्यासमा नारीका समस्या उठाइए पनि पुरुष चरित्रप्रति पनि न्याय गरिएको छ ।’ अनेसासका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतले पहिलो उपन्यासमा नै दह्रो रूपमा प्रस्तुत भएकोमा स्रष्टालाई बधाई ज्ञापन गर्दै नारी सम्बद्ध थुप्रै उपन्यासले सम्बोधन गरेको बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षको आसनबाट साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले सङ्घका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्दै मीरा गोतामेको साहित्यिक यात्राका लागि हार्दिक शुभकामना दिए । उनले प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अन्य अतिथिहरुलाई संघको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए भने लोकार्पित कृतिका सर्जक मीरा गोतामेलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।
उपन्यासकार मीरा गोतामेले आफूले समाजवरपर नेपाली नारीले भोगिरहेका अनेकन् समस्या देखेको र ती समस्याहरूले आफूलाई सधैं भावुक बनाउने गरेको बताए । त्यही भावुकताले घच्घच्याएपछि लकडाउनको समयको सदुपयोग गरेर उपन्यास तयार गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उपन्यासकारका जीवनसाथी एवम् प्रकाशक धर्मराज बोगटी, उपन्यासकारका बाल्यकालका साथी रक्षा अधिकारी, साहित्यिक पत्रकार सङ्घका सदस्य डा. दामोदर पुडासैनी किशोर र साहित्यकार गीता सापकोटाले पनि बोलेका थिए ।
चर्चित गायिका रितु कडेलले गीतहरु गाएको सो कार्यक्रममा चर्चित कलाकार नितु कोइराला, गायिका रिता के. सी., कवि एवं चलचित्र निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ, कवि एवं पत्रकार मणि लोहनी, समालोचक डा. रमेश शुभेच्छुक, चेतन कार्की प्रतिष्ठानका महासचिव मुरारी सिग्देल आदिको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी सो कार्यक्रममा साहित्यकारहरु कमल ढकाल, डा। शान्तिमाया गिरि, रमेश दहाल, वीणा सिह, रन्जना निरौला, सुमन बर्षा, पारु तिमिल्सिना, कमला शाक्य, उमेश पाण्डे, हरिराम पौडेल, यशोदा अधिकारी, इलु ढुंगाना, अनिल अनल, कल्ब फिप्टीका अध्यक्ष दमन बस्नेत, शोभा कार्की, सरिता दाहाल, बबिता ढुङ्गेल, सुमना कडेल, उर्मिला सुब्बा, रेबिना महर्जनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।